Teny ny bola amin'ny volana
Ho samihafa vola
Manondro ny vola sy ny teny ny amin'ny bola, zanabola sy ny endriky ny fandoavam-bola.
Dia hanao kajy ny fanaovana kajy ny habetsahan'ny vola, trosa sy ny vola lany ny bola.
Olona maro dia maro ho an'ny lehibe fividianana mampiasa ny asa ny bola. Banky sy ny tsy banky andrim-manolotra ny hahazo voninahitra ho toe-javatra isan-karazany. Rehefa raisinareo avy bola be, ohatra, mba hividy trano, fiara,-bola ny hanao trano na raharaham-barotra ny fampandrosoana, dia zava-dehibe ny mahafantatra fa bola izany ianao dia ho afaka hanao. Marina fa ny fisafidianana-bola dia manolotra fandaharana mba hampiasa ny fanaovana kajy bola. Midira ao amin'ny mety tsaha bola vola, hamaly fe-potoana amin'ny volana sy ny zanabola, ary koa ny mifidy ny karazana vola - ny annuity na ho samihafa, ka ho hitanao avy aiza tany ny fandoavam-bola ny bola dia ny handoavana ny trosa, ary inona ny hamaly ny olona liana teo amin'ny bola, mizana ny trosa amin'ny volana, ny habetsahan'ny ny overpayment toy ny isam-bolana, ary ho an'ny rehetra hoe bola, ary ny tena zanabola amin'ny trosa.
Ny ho samihafa ny fomba hamaly ny trosa amin'ny habetsahan'ny bola ny bola Mizara ho mitovy mizara. Ireo mizara ny ampahany lehibe mandrafitra ny fandoavam-bola isam-bolana. Anjara dia maneho ny residual liana amin'ny fifandanjana tsy handraisam-bola ny trosa. Dia toy izany ny isam ny habetsahan'ny vola mihena.
Amin'ny fomba io findramam-bola dia manana kileman-toetra hamaly.
Chief eo izany dia ny hoe ny bola mba handoavana trosa amin'izany fomba izany dia sarotra kokoa ny hahazo.
Ny banky dia tsy maintsy manao kajy ny vola ambony indrindra ny bola, mifototra amin'ny zava-misy na ny misambo-bola dia afaka mandoa ny fizarana voalohany. Midika izany fa ny hahazo izany-bola dia takiana ny hanana fidiram-bola ampy avo. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety hanampy onitra guarantors na mpiara-borrowers manintona.
Drawback iray hafa dia ny hoe ny tapany voalohany ny vola ho an'ny ny misambo-bola dia mafy indrindra. Raha toa ka tsy miresaka mikasika ny fampindramam-bola bebe kokoa izany dia mety ho lasa enta-mavesatra ho an'ny ny mpisambotra. Fa any aoriana, mety hivadika ho ny tsy fahamendrehana. Ny vidim-piainana sy ny fihenan'ny vola tombontsoa nanao tsy onerous.
Amin'ny fomba annuity hamaly ny trosa amin'ny bola mitovy Mizara ho faritra tsy ny habetsahan'ny trosa, fa eo ihany koa ny fahalianana ho amin'ny teny bola iray manontolo. Noho izany, izay misambotra dia mandoa fandraisana anjara mitovy vidy ny fiainana ny fandoavam-bola. Ankehitriny, io fomba fandoavam-bola ampiasain'ny ankamaroan'ny banky ara-barotra. Ny tena drawback ny annuity vola fa ny habetsahan'ny overpayment ny bola dia ho ambony kokoa noho ny tamin'ny rafitra ho samihafa. Ankoatra ny rafitra fandoavam-bola Annuity jerena, dia hoatran'ny hoe ny tapany voalohan'ny bola ianao hoe liana ny ankamaroany mandoa ny trosa. Fa ny tena habetsahan'ny trosa nandritra io vanim-potoana mbola saika mbola tsy nitoriana mihitsy.
Raha toa ianao ka te-hitondra voninahitra lehibe ho an'ny vola, ary tsy mikasa ny hamaly izany aloha, dia hanaiky-bola amin'ny annuity rafitra fandoavam-bola.
Amin'ny toe-javatra, indrindra fa rehefa maharitra fampindramam-bola, dia tsara kokoa ny mifidy ny banky izay manome fampindramam-bola amin'ny vola ho samihafa.
Toerana iombonanaDimensions ny peta-drindrintsikaGable tafoPent tafoMansard tafoHip tafoWood trussStraight tohatra eo amin'ny kofehyDirect lasely tohatraTohatra miaraka amin'ny 90 °Tohatra miaraka amin'ny 90 ° swivel, sy ny dinganaTohatra, mba hiala 180 °Tohatra mihodina ny amin'ny 180 ° sy ny milina dinganaTohatra telo spansTohatra telo spans sy ny milina dinganaSpiral tohatraMetal tohatraVy tohatra amin'ny bowstring zigzagVy tohatra miaraka amin'ny 90 °Vy tohatra miaraka amin'ny 90 ° sy ny bowstring zigzagVy tohatra amin'ny anjara-andron'i 180 °Vy tohatra mihodina ny amin'ny 180° sy ny bowstring zigzagAzo tsapain-tànana tohatraStrip fototraPier fototraFoundation slabAzo tsapain-tànana peratraPaving slabsFaritra jambaNy fikajiana ny diagonalNy firafitry ny simenitraHazoFittingsCeramic tailaGypsum plasterboardWallpapersLamba fitomboan'ny fitaovam-vy grillesWooden tranoWall fitaovanaFitaovana FloorDeckingStone FefyMetal fefyAndohalambo ny picket fefySelf-leveling rihanaVisorsTetika faritraLavakaNy boky avy amin'ny fantsakanaLavakaTurfDobo mahitsizoroTube famindram-ponenanaNy boky ny fiaraBarìka bokyNy boky ny fitoeran-javatra mahitsizoroNy habetsaky ny fasika na vatokely ao amin'ny antontan-javatraFikajiana ny fatra an-habakabaka amin'ny fantsonaEntonaToeplitz semicircularBuilding clampFanairana ny efitranoFitafianaBola Calculator